Haddii adiga ama qof kugu dhow uu xanuunsado - Krisinformation.se
TB1 Om du känner dig sjuk So
Miyaad adigu calaamado sida duuf iyo qandho ah leedahay? Waxay taasi khuseysaa haddii adiga ama qof kugu dhow uu xanuunsado oo uu calaamado Covid-19 ah leeyahay.
Uppdaterades 30 nov 2021 16:57
Hakinta/joojinta faafitaanka covid-19.
Dhamaan dadka oo dhami, oo ay xitaa kuwa tallaalay ku jiraan, waa inay sii wataan inay u fiirsadaan/iska eegaan calaamadaha covid-19. Haddii aad ka shakisan tahay inaad covid-19 qabto waa inaad guriga joogtaa, iska ilaalisaa kulamada dadka kale oo aad istijaabisaa.
Qofka aan tallaalka covid-19 wada qaadan waa inuu
Guriga joog haddii aad calaamado infegshan/ caabuqa hawo-mareenka ah leedahay. Ka digtoonow calaamadaha cusub ee aad yeelato.
Guriga joogto oo iska ilaaliso xiriirada dhow dhow intaad qaadista tijaabada ama natiijada tijaabada sugeyso.
Haddii aanad iska baarin/wax tijaabo ah iska qaadin waa inaad u dhaqantaa sidii oo aad cudurka qabto oo aad todoba maalmood guriga joogtaa.
Qofka aan tallaalka qaadan ayaa dib ugu laaban kara dugsiga, shaqada iyo waxqabadka xilliga firaaqada marka baaritaan covid-19 ah ka dib aan cudurka laga helin, uu bilaa xumad yahay ugu yaraan 24 saacadood oo uu dareemaayo inuu caafimaad qabo.
Is tallaal haddii aad karto
Waxay Hay'ada Caafimaadka Bulshada tallaalka u soo jeedinaysaa dhamaan dadka iska tallaali kara covid-19 si faafitaanka cudurka loogu yareeyo. Wax dheeraad ah ka akhri tallaalka covid-19.
Isa soo baar. Intaad qaadista tijaabada iyo natiijooyinka baaritaanka/shaybaarka sugeyso, waa inaad u dhaqantaa sidii oo aad covid-19 qabto, taasi micnaheedu waxa weeye inaad guriga joogto oo aad iska ilaaliso xiriirada dhow iyo inaad nadaafada ka taxadirto
Haddii la sugo inaad covid-19 qabto
Marka qofka covid-19 laga helo (uu bosetif yahay) ayaa markaas dadka isla guriga la degan la saarayaa xeerka habdhaqanka ee ah inay guriga todoba maalmood joogaan marka taas laga soo bilaabo maalinta qofka tijaabada laga qaadey. Waxay taasi khusaysaa dadka la tallaalay iyo kuwa aan la tallaalin labadaba iyada oo aan loo eegeynin haddii calaamado la leeyahay iyo haddii kale iyo da'da toona. Waxa sidoo kale dhamaantood/kuligood loo soo jeedinayaa inay tijaabo iska qaadaan.
Waxaad dib ugu laaban kartaa xanaanada, dugsiga, shaqada iyo waxqabadka xilliga firaaqada haddii aad ugu yaraan toddobo maalmood guriga joogtey marka laga soo bilaabo xilliga ay calaamaduhu kuu yimaadeen oo aad bilaa calaamado aheyd labadii maalmood ee ugu dambeeyey, aadna dareemeyso inaad caafimaad qabto. Xitaa haddii aad wali leedahay calaamado hawo mareenka sida qufac dhib badan ama duuf.
Haddii aad tijaabo iska qaadey oo aanad laakiin lahayn calaamado ayaa todobada maalmood ee aad guriga joogto laga soo tirinayaa maalinta lagaa qaadey baaritaanka.
Wac 1177 waxyaalaha talobixinta caafimaadka ah iyo haddii aad daryeel caafimaad iyo daawaynta calaamadahaaga uga baahan tahay . Wixii xaaladaha ay naftu halis ku jirto wac 112.
Cudurka Covid-19 waa cudur guud ahaan bulshada halis ku ah sida ku xusan xeerka xakameynta infegshanka/cudurka. Sidaa darteed ayay masuuliyad kaa saaran tahay inaad raacdo xeerarka habdhaqanka ee aad ka heshay daryeelka caafimaadka iyo bukaanka si looga hortagto faafitaanka infegshanka.
Haddii ay calaamado jiraan ayuu ilmahu u baahan yahay inuu guriga joogo ilaa inta aanu qandho laheyn muddoo 24 saacadood ah oo uuna dareemaayo inuu caafimaad qabo, xitaa haddiii uu weli calaamado hawo-mareenka ah sii leeyahay.